१ ways तरीकाले शिक्षाले संयुक्त राष्ट्र दिगो विकास लक्षहरूलाई प्रभाव पार्दछ - शान्ति शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान
[जनवरी १, २०२१] विशप डेसमन्ड टुटुलाई श्रद्धाञ्जली समाचार र हाइलाइटहरू
१ ways तरीकाले शिक्षाले संयुक्त राष्ट्र दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रभाव पार्छ
जनवरी 27, 2016 समाचार र हाइलाइटहरू 0
सतत विकास लक्ष्यहरू
(मूल लेख: शिक्षाको लागि ग्लोबल पार्टनरशिप, जुलाई १२, २०१।)
सेप्टेम्बर २०१ In मा संयुक्त राष्ट्र संघले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरुमा सफल हुने नयाँ दिगो विकास लक्ष्यहरुप्रति प्रतिबद्धता जनायो। एसडीजीहरूले गरीबी र भोकमरी कम गर्न, स्वास्थ्य सुधार गर्न, समानता सक्षम गर्न, ग्रहको रक्षा गर्न र अन्य धेरैको नयाँ र महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी प्रयासको रूपरेखा दिन्छ। वास्तविक प्रगति मायालु हुनेछ जब सम्म सबै बच्चाहरूले एक गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्दैनन्।
डाटा कार्डहरू हेर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस् बाटोमा शिक्षाले सबै दिगो विकास लक्ष्यहरूमा प्रभाव पार्दछ।
शिक्षा र ग्लोबल गोल इन्फोग्राफिक
# १ गरीबी छैन
सबै ठाउँमा गरीबीको अन्त्य गर्नुहोस्।
शिक्षा गरीबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिकाहरू मध्ये एक हो।
अनुसार युनेस्को, १171१ मिलियन मानिसहरूलाई गरिबीबाट हटाउन सकिन्छ - विश्वव्यापी गरीबीमा १२% ड्रप - यदि कम आय भएका देशहरूमा सबै विद्यार्थीहरूले आधारभूत पढ्ने सीपले स्कूल छोडे भने।
युनेस्को पनि फेला पर्यो त्यो एक अतिरिक्त वर्षको शिक्षाले एक व्यक्तिको आय १०% सम्म बढाउँदछ, र प्रत्येक अतिरिक्त वर्षको शिक्षाले औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन ०. 10% ले बढाउँदछ।
# २ भोक छैन
भोकमरी समाप्त गर्नुहोस्, खाद्य सुरक्षा र सुधारिएको पोषण प्राप्त गर्नुहोस् र दिगो कृषिलाई बढावा दिनुहोला।
त्यहाँ कडा प्रमाण छ कि एक आमाको शिक्षाले उनीहरुको बच्चाहरुको पोषण सुधार गर्दछ, विशेष गरी जब उनी उच्च स्तरको शिक्षा खोज्छन।
सबैभन्दा हालै युनेस्को अनुसन्धान २०१ in मा देखाउँदछ कि कम आय भएका देशहरूमा करीव 2013 47 करोड बच्चाहरू छन् जो प्रारम्भिक बाल्यावस्थामा कुपोषणको परिणाम स्वरूप स्तब्ध छन्। यदि ती देशहरूमा सबै आमाहरूसँग प्राथमिक शिक्षा छ भने, १1.7 लाख बच्चाहरूलाई स्टन्टि fromबाट जोगाउने थियो। यदि ती आमाहरुले माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गरेको भए, १२.२ मिलियन बच्चाहरु स्टन्टि fromबाट बचाइने थिए।
# Good राम्रो स्वास्थ्य
स्वस्थ जीवन सुनिश्चित र सबै उमेर मा सबैको लागि कल्याण को बढ़ावा।
राम्रो शिक्षित व्यक्तिहरू स्वास्थ्य जोखिमको लागि धेरै कम असुरक्षित हुन्छन्।
जब विशेष मा आमाहरू शिक्षित हुन्छन्, अत्यधिक प्राथमिक तहमा पनि, तिनीहरू विभिन्न रोगका बारेमा राम्ररी जानकारी हुने सम्भावना बढी हुन्छ र तिनीहरूलाई रोकथाम गर्न कदमहरू चाल्दछन्। युनेस्को रिपोर्ट कि आमाको शिक्षाको प्रत्येक अतिरिक्त वर्षले शिशु मृत्युदरको सम्भावना १०% कम गर्दछ र जसको आमाले पढ्न सक्ने बच्चा past०% बढी विगत age वर्ष बाँच्न सक्ने सम्भावना छ। A अध्ययन लान्सेट पत्रिकामा यो पनि देखायो कि महिला शिक्षामा विश्वव्यापी वृद्धिको कारण विगत चार दशकमा million० लाख बच्चाको मृत्यु रोकिएको छ।
#।। गुणस्तरीय शिक्षा
समावेशी र न्यायसंगत गुणस्तरको शिक्षा सुनिश्चित गर्नुहोस् र सबैको लागि आजीवन सिकाउने अवसरहरू प्रबर्धन गर्नुहोस्।
शिक्षा आफैंमा निर्माण हुन्छ, अरूलाई शिक्षित गर्न र क्षमतालाई बढावा दिने संस्कृतिलाई अधिक क्षमता प्रदान गर्दछ।
शिक्षाले सबै उमेरका शिक्षार्थीहरूलाई सीप र मूल्यवान वैश्विक नागरिक हुन आवश्यक बनाउँदछ, जस्तै मानव अधिकारको सम्मान, लैंगिक समानता र वातावरणीय स्थिरता। कुनै देश र यसको जनताको विकासको लागि मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र सुदृढीकरण महत्वपूर्ण हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षामा लगानीविना अन्य सबै विकास सूचकहरूमा प्रगति स्थिर हुनेछ। को शिक्षाको लागि ग्लोबल पार्टनरशिप यो सुनिश्चित गर्न काम गर्दछ कि उनीहरूका बच्चाहरू जहाँसुकै बसे पनि उनीहरूले सबैभन्दा कमजोरलाई प्राथमिकता दिँदै एक गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्दछ।
#।। लैङ्गिक समानता
लैंगिक समानता प्राप्त गर्नुहोस् र सबै महिला र केटीहरूलाई सशक्त बनाउनुहोस्।
शिक्षाले केटीहरू र महिलाहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमतामा पुग्न सक्षम गर्दछ - पुरुष र केटाहरूसँग समानतामा - उनीहरूको घर, समुदाय, कार्यस्थल र प्रभाव संस्था।
एक अतिरिक्त स्कूल वर्ष एक महिला को आय को २०% सम्म वृद्धि गर्न सक्दछ विश्व बैंक अध्ययन, र योजना अन्तर्राष्ट्रिय देखाईएको छ केहि देशहरूमा केटाहरूलाई समान स्तरमा शिक्षित गर्न असफल भएर केही देशले एक बर्ष १ अर्ब डलरभन्दा बढी गुमाउँछन्। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि केटी र केटाहरूको स nar्ख्याको बीचको भिन्नताले पनि मजदूरी र रोजगारीमा लै gender्गिक असमानताहरू गर्दछ।
# Clean सफा पानी र सरसफाई
सबैका लागि पानी र सरसफाइको उपलब्धता र दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
समुदायहरू उनीहरूको सरसफाइ र स्वास्थ्य बिचको सम्बन्धको बारेमा अझ राम्ररी शिक्षित हुँदै जान्छन् हेर्नुहोस् सरसफाईमा उल्लेखनीय सुधार। र जसो समाजहरू आर्थिक तवरले समृद्ध हुँदै जान्छन्, उनीहरूले आधुनिक पानी र सरसफाई सुविधा र प्रणालीहरू निर्माण गर्न अझ सक्षम हुनेछन् भन्ने तर्क राखिएको छ।
धेरै समाजमा, केटीहरूले प्रति हप्तामा १ 15 घण्टा आफ्नो परिवारको लागि पानी ल्याउन खर्च गर्न सक्छन, स्कूलको लागि समय नै छोड्दैन, युनेस्को रिपोर्ट। त्यस्तै, सुरक्षित सरसफाइको पहुँच बिना, त्यहाँ धेरै बिरामी बच्चाहरू छन् जसले स्कूल छोड्नेछन्। इथियोपियामा १ 6.8 1990 ० देखि २०० from सम्म 2006..XNUMX मिलियन मानिसहरूले सुधारिएको सरसफाइमा पहुँच प्राप्त गरे। यो आंशिक रूपमा शिक्षित समुदायहरूलाई सरसफाई र स्वास्थ्य बिचको सम्बन्धको बारेमा छ, र नयाँ, सस्तो प्रविधिको कार्यान्वयनको परिणाम हो।
# Clean स्वच्छ उर्जा
सबैका लागि किफायती, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक उर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुहोस्।
शिक्षा जस्तै स्वच्छ र सुलभ ऊर्जा देशको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय विकासको अत्यावश्यक निर्माण ब्लक हो।
अनुभवले सुझाव दिन्छ कि शिक्षित नागरिकहरू सम्भावित नयाँ अभ्यास र प्रविधिहरू मान्यता र उनीहरूको समुदाय समृद्धिमा मद्दत गर्न अझ बढी झुकाव हुने छन्। र, शिक्षाको साथ, ती नागरिकहरू हुनेछन्स्थित आउन सक्ने लामो समयको लागि उनीहरूको देशहरूलाई दिगो राख्न सक्ने ऊर्जा पूर्वाधारहरूको निर्माण र मर्मतसम्भार गर्न।
# Good राम्रा रोजगार र आर्थिक बृद्धि
दिगो, समावेशी र दिगो आर्थिक बृद्धि, पूर्ण र उत्पादक रोजगारी र सबैको लागि सभ्य कामको प्रचार गर्नुहोस्।
शिक्षा आर्थिक प्रगति र समृद्धिको सब भन्दा शक्तिशाली चालक हो। अध्ययन देखाईएको छ कि स्कूलको प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष औसत वार्षिक कुल घरेलू उत्पादन (GDP) ०. 0.37% ले वृद्धि गर्दछ।
यो सबै वैश्विक अनुगमन रिपोर्टको लागि शिक्षा देखाइयो कि १ 1965 in Asia मा, पूर्वी एसिया र प्रशान्त मा वयस्कहरु, औसत मा स्कूल मा २.2.7 बढी वर्ष बिताए उप-सहारा अफ्रिका मा भन्दा। Asia 45 बर्षको अवधिमा पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा प्रति व्यक्ति आयको औसत वार्षिक वृद्धि 3.4..0.8% थियो, तर उप-सहारा अफ्रिकामा ०.XNUMX% थियो। शिक्षाको स्तरमा भिन्नताले विकासको भिन्नताको आधा बारे वर्णन गर्दछ।
# Inf पूर्वाधार
लचिलो पूर्वाधार निर्माण, समावेशी र दिगो औद्योगिकरण र फोस्टर इनोवेशनको प्रचार।
शिक्षाको साथ, देशहरू सँगै भेला हुन र प्रगति, स्वास्थ्य र सुरक्षाको भौतिक निर्माण ब्लकहरू कायम राख्नको लागि अधिक क्षमता छ।
जब देशका बासिन्दाहरू अझ राम्रो शिक्षित हुन्छन्, तिनीहरूले सडक र पुलहरू, आईसीटी प्रणाली, बन्दरगाहहरू र एयरपोर्टहरू, स्वास्थ्य र वित्तीय प्रणाली, प्रशासन अभ्यास र अधिक धेरै निर्माण गर्न र सम्हाल्नको लागि आवश्यक पर्ने आफ्नो महत्वपूर्ण प्राविधिक सीप र रचनात्मक समस्या समाधान गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अन्य संरचना जसले एक देशको जीवनलाई सुधार र फस्टाउन सक्षम गर्दछ। राम्रोसँग योजनाबद्ध र अपरेटिंग पूर्वाधारले थप बच्चाहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ। अझ राम्रो पूर्वाधारले बच्चाहरूका लागि - विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रहरू जोसँग केही विकसित सडकहरू वा यातायातका अन्य विश्वसनीय साधनहरू छन् - सुविधाजनक र छिटो स्कूल जान सम्भव बनाउँदछ।
# १० असमानताहरू
देशहरू भित्र र बीचमा असमानता कम गर्नुहोस्।
अधिक बच्चाहरु, जनसांख्यिकीय, भौगोलिक र सांस्कृतिक स्पेक्ट्रम को शिक्षित बन्न को रूप मा, हामी एक देश को आय असमानता मा सुधार देख्न सक्छौं।
एक अध्ययन एक देशको शिक्षा समानता मा एक ०.१% सुधार देखाएमा, चालीस बर्ष भन्दा बढी मा, यसको प्रति व्यक्ति आय २ 0.1% बढी बढाउन सक्छ।
अनुसन्धान अझ बढी शिक्षा समानताका साथ भियतनामको आर्थिक प्रदर्शनमा सुधार आएको देखाउँदछ र २०० 2005 मा यसको जीडीपीले पाकिस्तानलाई पछाडि पार गर्यो जहाँ शिक्षाको समानता स्तर भियतनामको भन्दा आधा हो।
र, राम्रो शिक्षाको साथ, परम्परागत रूपमा विपन्न वर्गका मानिसहरु आफ्नो अधिकार र आवश्यकताको लागि वकालत गर्न, आर्थिक, सामाजिक र नागरिक जीवनको उच्च चिनारीमा प्रवेश प्राप्त गर्न र तिनीहरूको समाजमा असमानताको साँघुरो अन्तरलाई सहयोग गर्न राम्रो स्थानमा छन्।
# ११ दिगो शहरहरू र समुदायहरू
शहरहरू र मानव बस्तीहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, लचिलो र दिगो बनाउनुहोस्।
शिक्षाको साथ, व्यक्तिहरू बुझ्न, समर्थन र शिल्प रचनात्मक समाधानहरू नभई दिगो शहरहरू र समुदायहरूको आधारभूत सामग्रीहरू स्थानमा छन् भन्ने कुरा निश्चित गर्दछन्।
राम्रो सहरी योजना, कुशल उर्जा प्रयोग, राम्रो पानी र सरसफाई व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण र राम्रो काम गरिरहेका समुदायका अन्य तत्वहरूका लागि ज्ञान र सीप भएका व्यक्तिहरू आवश्यक छन् जुन केवल गुणस्तरीय शिक्षामार्फत उपलब्ध छन्। को मुटुमा विश्व बैंक दिगो शहरहरू पहलउदाहरणका लागि, जागरूकता निर्माण कार्यक्रमहरू, स्थानीय निदान उपकरणहरूको विकास र कार्यान्वयन, नीति सुधार र अन्य कार्यहरू हुन् जुन केवल प्राथमिक होइन तर उन्नत शिक्षाको आवश्यक पर्दछ।
# १२ जिम्मेवार खपत
दिगो उपभोग र उत्पादन बान्की सुनिश्चित गर्नुहोस्।
शिक्षाले व्यक्तिहरू उर्जा र पानी अधिक कुशलताका साथ प्रयोग गर्ने र घरका फोहोर पुन: प्रयोग गर्ने कठिनाइहरू उत्पन्न गर्दछ। युनेस्कोका अनुसार
A अध्ययन इथियोपियाका six वर्षको शिक्षाले २०% ले सुधार गरेको देखायो भने किसानले माटो संरक्षण, बिरुवा लगाउने मितिमा परिवर्तन र बालीका प्रजातिहरूमा परिवर्तन जस्ता प्रविधि अपनाएर मौसम परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना बढी छ।
अर्को अध्ययन देखाइएको छ कि परिवारको एक प्रमुख प्राप्त शिक्षा को प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को लागी, एक समाज एक परिवार मा पुरानो बृद्धि वन को कटौती गर्न वार्षिक आधार मा 4% र 21.5% को बीच सम्भावना कम छ। साथै, विकासशील देशहरूमा, अनुसन्धान बढाउँदै शिक्षा संग ऊर्जा-दक्ष प्रविधिको चेतना मा एक सुधार छ भनेर औंल्याउँछ।
# १,, १ and र १
ग्रह लाई सुरक्षित गर्नुहोस् - जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावहरु लाई लड्न तत्काल कदम चाल्नुहोस्।
पानीमुनिको जीवन - संरक्षण र दिगो रूपमा दिगो विकासको लागि सागरहरू, समुद्री र समुद्री स्रोतहरूको प्रयोग गर्नुहोस्।
जग्गामा जीवन - स्थलीय इकोसिस्टमको दिगो प्रयोगको संरक्षण, पुनर्स्थापना र प्रबर्धन गर्न, वनको जथाभावी प्रबन्ध गर्नुहोस्, लडाई मरुभूमिकरण, र रोक्नुहोस् र भूमि विफलता र रोक्नुहोस् जैवविविधता नोक्सान।
उच्च तहको शिक्षाको साथ, धेरै बिभिन्न समाजका मानिसहरूले वातावरणको कल्याणको बारेमा बढी चिन्ता देखाउँछन्।
२ countries देशहरूमा माध्यमिक शिक्षा भन्दा थोरै २ with% मानिसहरूले वातावरणप्रति चिन्ता व्यक्त गरे जुन माध्यमिक शिक्षा भएका of 29% र तृतीयक शिक्षा सहितको 25 37% मानिसहरूमा थिए। शो.
साथै, वातावरणीय शिक्षा कार्यक्रमहरू जलवायु परिवर्तनसँग लड्न र जलीय जीवन र स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्न धेरै राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रयासहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रगतिको लागि जिम्मेवार छन्। तर यस्तो किसिमको शिक्षा मात्र आफ्नो पूर्ण क्षमतामा पुग्न सक्दछ जहाँ एक देश वा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आलोचनात्मक जनसँग आधारभूत शिक्षा सीप हुन्छ जुन प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाको साथ आउँदछ।
# १ Peace शान्ति र न्याय
दिगो विकासको लागि शान्तिमय र समावेशी समाजहरूको प्रवर्धन, सबैका लागि न्यायको पहुँच प्रदान गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, उत्तरदायी र समावेशी संस्था निर्माण गर्ने।
शिक्षा शान्ति, सहिष्णुता र एक स्वस्थ नागरिक समाज को एक अनिवार्य अग्रदूत हो।
अध्ययन माध्यमिक शिक्षा भएका व्यक्तिहरूले केवल प्राथमिक शिक्षा भएकाहरू भन्दा बढी भाषा बोल्ने मानिसहरू (ल्याटिन अमेरिकामा २१% फरक र अरब राज्यहरूमध्ये% 21%), आप्रवासी (क्रमशः २ 34% र १%%) लाई सहिष्णुता देखाउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ। ), समलि .्गीहरू (and२ र १%), फरक धर्मका मानिस (%%% र १ people%), HIV (% 26% र १२%) भएका मानिसहरू र फरक जाति (% 16% र २%%)।
हामी पनि चिन्छु साक्षर व्यक्तिहरूले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिन र आफ्नो नागरिक अधिकार प्रयोग गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ, र यदि माध्यमिक शिक्षाको लागि भर्ना दर औसतभन्दा १० प्रतिशत बढ्यो भने युद्धको जोखिम बढी हुन्छ कम भयो करीव तीन प्रतिशत पोइन्ट द्वारा।
# 17 लक्ष्यहरूको लागि साझेदारी
कार्यान्वयनका साधनहरूलाई सुदृढ पार्नुहोस् र दिगो विकासको लागि विश्वव्यापी साझेदारीलाई पुनःजीवित गर्नुहोस्।
साझेदारी बलियो विकास परिणामहरू प्राप्त गर्न को लागी एक प्रभावकारी तरीका हो।
शिक्षाको लागि ग्लोबल पार्टनरशिप सहयोगी साझेदारीमा काम गर्ने शिक्षा र अन्य विकास क्षेत्रमा प्रगति कसरी बढाउन सक्छ भन्नेको एउटा उदाहरण हो। शिक्षाको लागि ग्लोबल पार्टनरशिपको साझेदारी मोडेल राष्ट्रिय शिक्षा योजनाहरूको लागि दाताहरूको वित्तीय सहयोग जुटाउँछ र पign्क्तिबद्ध गर्दछ जुन आवश्यकताहरू निर्धारण र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा आधारित छ।
यसले सबै आन्तरिक र बाह्य अभिनेताहरूको कार्य समन्वय गर्दछ जुन त्यस प्रक्रियामा भूमिका खेल्दछ। जब सबै भन्दा महत्वपूर्ण खेलाडीहरू सँगै काम गर्छन्, हामी उपलब्ध संसाधनहरूको साथ अधिक क्षमता र प्रभावहरू देख्छौं। र हामी ती देशहरूमा वास्तविक प्रगति देख्दछौं जुन उनीहरूका बच्चाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा ल्याउन र सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी लक्ष्यको नजिक जानको लागि भोकाएका छन्।
जस्तै २०१ UN पछि विकास एजेन्डामा प्रख्यात व्यक्तिहरूको संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरको प्यानल २०१ 2013 मा घोषणा गरिएको थियो, "शिक्षाको लागि ग्लोबल पार्टनरशिपले सीमान्तकृत बच्चाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्दैछ, शिक्षाका धेरै खेलाडीहरूको समन्वय गर्दै, बेकारका प्रतिकृति बिना नै सहयोग प्रदान गर्दै र स्थानीय नेतृत्वको अनुसरण गर्दैछ। जीपीई एकल सेक्टर [शिक्षा] हो तर यसले कसरी सहकार्यले राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ भनेर देखाउँदछ। समान क्षेत्रहरू अन्य क्षेत्रमा उपयोगी हुन सक्छ। ”
Grinnell कलेज: शान्ति र विवादास्पद अध्ययन कार्यक्रम दुई-वर्षीय मेलन Postdoctoral स्थिति
"हामी आफ्ना छिमेकीहरूसँग शान्तिमा बाँचौं" (आर्मेनिया)
श्रीलंका सरकार र युनिसेफले दिगो शान्ति र शिक्षा सम्बन्धी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगोष्ठी आयोजना गरे
जुन 4, 2016 गतिविधि रिपोर्टहरू 0
युनिसेफले शिक्षा मन्त्रालयको साथ साझेदारीमा श्रीलंकामा दिगो शान्ति र शिक्षा सम्बन्धी पहिलो दक्षिण एसिया सम्मेलनको आयोजना गर्यो। दिगो शान्ति निर्माणमा शिक्षाको भूमिकामा बढी जागरूकता खडा गर्ने गोष्ठी। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
१२ प्रश्नहरू प्रत्येक जलवायु कार्यकर्ताले सुन्छन् र के भन्ने भनेर
मार्च 13, 2016 CV, प्रकाशन 1
मौसम वास्तविकता परियोजनाले मानव-निर्मित जलवायु परिवर्तनको वास्तविकता बिरूद्ध सामान्य भ्रामक धारणा र तर्कहरूको ब्यबहार गर्नका लागि "१२ प्रश्नहरू प्रत्येक मौसम कार्यकर्ताले सुनेका र के भन्ने" भन्ने नि: शुल्क ई-पुस्तक सिर्जना गरेको छ र किन व्याख्या गर्ने सरल तरिकाहरू। तिनीहरू पूर्ण रूपमा गलत छन्। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
एक पीस शिक्षा घोषणा पत्र र WCCES को भूमिका। तुलनात्मक शिक्षा समितिको वर्ल्ड काउन्सिलबाट (WCCES) अध्यक्ष कार्लोस अल्बर्टो टोरेस। हाम्रो विश्वव्यापी पारस्परिक निर्भरता को युग वैश्विक र स्थानीयको द्वन्द्वात्मकता द्वारा मात्र चिनिन्छ जुन हामी बेइजि inमा छलफल गर्नेछौं, तर आतंकवाद र आतंकवादको द्वन्द्ववादले पनि। म तपाईंलाई WCCES को अध्यक्षको रूपमा लेख्दै छु तर अर्जेन्टिनामा राज्य आतंकवादको शिकारको रूपमा पनि जसले मलाई निर्वासन बाध्य पारे। म WCCES लाई हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी सम्बन्धी वार्तालापमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]